Igobolondo amaqanda - umthombo ekahle calcium ne ukudalwa esiyingqayizivele kunazo emvelo, izinto zalo amaminerali kungaba ukhuluma undendende. Egg amagobolondo - lena umkhiqizo oluyigugu kakhulu eziphilayo, ngoba calcium carbonate, it is kahle amuncwa wumzimba. Eggshell njengoba umthombo calcium - Yinganekwane Noma Yiqiniso?
amaqanda Shell deku calcium esetshenziselwa ukwelapha zonke izinhlobo izifo ngokuvamile ezihlotshaniswa nalesi ukuntula microelement. Kunconywa ukusebenzisa abantu nge kwamathambo, futhi nsuku zonke.
Abangamaphesenti angu-eggshell 90 izakhamzimba ezidingekayo ukuze i-calcium carbonate - kuyasiza kakhulu amathambo. Futhi, iqukethe umsoco ezifana bethusi, bensimbi, fluorine, manganese.
udokotela Hungarian Krompeherom kwafakazela ukuthi amaqanda igobolondo deku calcium isetshenziswa impela isikhathi eside, yena kunomphumela ngokuyisimangaliso emzimbeni womuntu. Wayeqhuba ukutadishwa kwalo mkhiqizo. Lo mbuso waqhubeka ubusa iminyaka engu-10, phakathi kwesikhathi lapho usosayensi okwakumelwe bakufunde futhi uhlole ngokugcwele igobolondo. Ngenxa yalokho, udokotela wafakazela ukuthi isakhiwo bayo ufana ithambo lomuntu, izinyo izicubu.
Lungiselela egg shell ukudla
Ngaphambi ukusebenzisa eggshell, kufanele kuqala ukucubungulwa kahle. Lokhu kumele kwenziwe kanje:
Ukuze uqale, kuzomele qiniseka begeza igobolondo ngaphandle futhi yomile.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ochotshoziwe bese efakwa kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu engaphezu kuka-10.
Kufanele ke awathele uhlobo oluthize gilazi tsha, okuyinto engcono kakhulu endaweni epholile emnyama.
Namuhla, odokotela batusa kuthatha igobolondo amaqanda, welula pre fresh yayo kalamula. eggshell njengoba umthombo calcium isetshenziswa kabili ngonyaka njengoba isilinganiso izifo.
Kanjani futhi nini kungcono ukusebenzisa amagobolondo amaqanda
Empini yokulwa ne radionuclides. Umzimba womuntu uyakwazi ngokushesha buthelela izinto radioactive ezikhona imvelo. Bona, yebo, umthelela omubi empilweni, yingakho lowomuntu kumuntu kumele kudingeke ukuba ahoxe. Ngenxa yale njongo, igobolondo isetshenziswa olinganise ezilandelayo - ¼ isipuni usuku ngalunye.
Ngo Pediatrics. Eggshell kahle kufakwe nge umzimba womuntu. Odokotela batusa akunika izingane nabesifazane abakhulelwe kuwo zonke izinsuku. Odokotela bezingane belulekwa ukuba engeza igobolondo baby ukudla. Kuyasiza ikakhulukazi yamathambo futhi igazi.
Njengoba ibhekwa. Eggshell kuyasiza hhayi kuphela kwabesifazane abakhulelwe, kodwa futhi abantu eminyakeni engu-50 njengoba amathambo abe siphuka kalula unyaka ngamunye. Futhi amagobolondo kahle kuqinisa amazinyo, izinzipho, kuthuthukisa wamathumbu nasesiswini, ikhambi isifuba kanye ukuqunjelwa, aqede ubuhlungu rheumatism.
eggshell njengoba umthombo calcium
Calcium akuyona kuphela ewusizo for amazinyo, amathambo kanye nezinzipho, kodwa futhi kuyadingeka kakhulu ukusebenza evamile inhliziyo, imithambo yegazi, nemisipha futhi uqondiswe isimiso sezinzwa esiyinhloko. Uma umzimba ngeke babe calcium eyanele zingavela njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, i-herpes, ukucindezeleka, inkumbulo ukungakhuli, isicanucanu futhi ngikhishwe disorder umzimba.
Kubantu abadala, calcium ukuntula eba kwamathambo (kwamathambo), okuyinto lifaka wesine ngemva izifo zenhliziyo, umdlavuza nesifo sikashukela. Ukusetshenziswa ngelanga imayelana eyodwa igremu.
Imithombo eyinhloko calcium zihlanganisa kule mikhiqizo: amaqanda amagobolondo, ushizi, cottage shizi, ubisi, soy, ama-aphula, ama nati, amabhilikosi omisiwe, iklabishi, imbewu ithanga imbewu sunflower. Ebusika, inqubo yokuthola i-calcium ohlushwa ukuntula kavithamini D. Ngaphandle UV umzimba awukwazi ukhiqize uvithamini D, wona ulawula ibhalansi calcium emzimbeni womuntu.
Kuyini ukusetshenziswa eggshell
Odokotela baqinisekisa ukuthi igobolondo iqanda - umthombo calcium, indlela enhle kakhulu aphathe lezi zifo ezilandelayo: yamathambo, ukhwekhwe, sokuntuleka kwegazi kanye, yebo, diathesis. Amaqanda egg shell aqukethe eningi calcium, kodwa ke, kufanele kuqashelwe ukuthi kwaba inkukhu hhayi amanye. Ngaphambi amagobolondo nepepper, kahle ukufuthelana ngaphambili.
Kuyini ukusetshenziswa amaqanda? Eggshell njengoba umthombo calcium kuyadingeka ukuze kwendikimba evamile. Uma sikucela le ogogo mayelana izinzuzo eggshell, bazokwazi ukukutshela kakhulu. Babesebenzisa ke for ekwelapheni izifo wokugaya ukudla. Ngokwesibonelo, asetshenziswa ukwelapha eggshell esiswini njengoba umthombo calcium. Ukusetshenziswa izifo yayo enkulu futhi umgudu wokuphefumula, izilonda kohlelo urogenital.
Ukulungiswa eggshell ne citric acid
Ngu ingxenye Iqanda powder kuyadingeka ukuze ungeze okungenani ezine amathonsi kalamula iconsi uvithamini D, wona angathengwa ngasiphi ekhemisi. Kufanele uthathe kathathu ngosuku ukudla. Isikali lithembela ngokuphelele ubudala, zokhahlamba kusuka mayelana 1.5 kuya ku-3 amagremu ngosuku.
I powder kusuka kumasistimu asebenzayo ne kalamula vitamin D iyasiza izingane zeminyaka 1-6, ngoba ngalesi yobudala kukhona izinqubo of amathambo ekwakhekeni.
Indlela ukupheka igobolondo amaqanda deku calcium: ukwelapha isifo
Exudative-catarrhal diathesis. Ingane kufanele inikezwe igobolondo ¼ isipuni kabili ngosuku. Umphumela kungabonakala amaviki amathathu noma amane, kodwa ngezinye izikhathi kungase kuthathe izinyanga ezimbili kuya kwezintathu.
Urticaria, ukushisa prickly nezinye izifo zesikhumba. Kuyadingeka ukuba ubilise amaqanda 15, susa akhe amagobolondo namathambo Bilisa ke ezintathu-litre jar ngamanzi abilayo, shiya usuku olulodwa. Le isixazululo ingasetshenziswa okugeza, izingane ukugeza, isiphuzo, kungenzeka ukulungiselela ukudla ukumnika. Calcium kubaluleke kakhulu kwabesifazane. Ngo kwamathambo, udinga ukuthatha hhayi ningi than 5 amagremu egg shell.
isifuba somoya bronchial. Lokhu powder okufanele zithathwe kathathu ngosuku: ekuseni, ntambama nakusihlwa, eziqala eyodwa igremu, futhi liphetha ngamazwi 0.1. Khona-ke futhi, avuse komunye igremu, njalo izinsuku ezingu-30. Khona-ke ikhefu ngenyanga bese uqale indlela yokwelashwa kaningi. Asmatikam angapheka umuthi esiphundu, okungase okulungiselelwe iresiphi elandelayo: egg shell 10 kufanele uthele kalamula, 9-10, bese efakwa endaweni emnyama izinsuku 10. Le isixazululo exutshwa kwenye nenye 10 amaqanda izikhupha kufanele kube isiswebhu obuhle 10 wezipuni ushukela bese wengeza namamililitha 500 ugologo. Umuthi kumele kube kahle edidayo. Manje isilungele ukusetshenziswa. Kumelwe uthathe esisodwa isipuni kathathu ngosuku.
Ukuzisebenzisa kahle le eggshell
Okwamanje, ngokuvamile kakhulu esetshenziswa abavamile ubisi whey njengenhlangano kuphela eggshell. Ngokwesibonelo, umuntu angabona zilandise iresiphi elidala okukhuthaza ukususwa ezinso. Endaweni skvasit efudumele kudingeka embizeni ezintathu-litre ubisi wenze okugeza amanzi whey. I serum kufanele chilled ukubeka amaqanda amathathu fresh. Ibhange kudingeka wabopha ngokucophelela nge gauze bese efakwa, endaweni efudumele emnyama izinsuku 10 ukuze nje igobolondo siphela ngokuphelele.
Okulandelayo amaqanda kumele asuswe ikani, futhi lubhoboze ifilimu ngommese, okuqukethwe ngobumnene exutshwe 300 amagremu of uju. Le filimu kumelwe zilahlwe futhi buthule kakhulu uthele ingxube zingene serum, night stand in a esiqandisini. Phuza kudingekile, ukufudumala phezu okugeza amanzi, okungenani 0.5 izinkomishi ezingenalutho esiswini ihora elilodwa ngaphambi ukudla futhi ebusuku ngaphambi sokulala.
Ngaphambi kokusebenzisa eggshell isidingo ukwazi ukuthi akuyona neze akwenzeki ukusebenzisa in Oncology. Abesilisa futhi kuyadingeka ukuba acabangele, ngoba uma overdo it, kungenzeka ukuthuthukisa umdlavuza wendlala.
ukwelashwa igobolondo waziwa isikhathi eside, ngaphambi ngokuvamile isetshenziswa ngendlela umuzwa esivuthayo njengendlela powder in izifo ezifana nama-ulcer. powder avuthile umongozima yizicucu zibe ekhaleni ngokunjalo imisiwe. Gcina amagobolondo amaqanda e iphakethe bengayi, ngoba amavukuzi kungenziwa ithole, kungcono wasibeka embizeni ingilazi futhi uvale lid.
Ukuze kuncishiswe ukulahleka calcium, ezidingekayo ukuze sinciphise izinga lokutholakala kwengculazi ukusetshenziswa yekhofi, ugwayi, iziphuzo carbonated, utshwala. Hlala uphilile!
Seyogathi "Activia": incazelo, ukwakheka, ukusetshenziswa